बिदेशमा हुने नेपालीलाई खुसिको खबर ! ह्वात्तै बढ्यो पैसाको भाउ, यस्तो छ आजको बिनिमय दर - News20 Media
February 17, 2020 N20LeaveaComment on बिदेशमा हुने नेपालीलाई खुसिको खबर ! ह्वात्तै बढ्यो पैसाको भाउ, यस्तो छ आजको बिनिमय दर
काठमाण्डौ : सोमबार कुवेती दिनार र ओमानी रियालको भाउ बढेको छ । अरु विदेशी मुद्राको भाउ भने थोरै घटबढ भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार अमेरिकी डलर एककोे खरिददर ११३ रुपैयाँ ९१ पैसा र बिक्रीदर ११४ रुपैयाँ ५१ पैसा तोकेको छ । हिजो पनि खरिददर ११३ रुपैयाँ ९१ पैसा र बिक्रीदर ११४ रुपैयाँ ५१ पैसा नै थियो ।
साउदी रियाल एकको खरिददर ३० रुपैयाँ ३७ पैसा र बिक्रीदर ३० रुपैयाँ ५३ पैसा तोकेको छ । हिजो पनि खरिददर ३० रुपैयाँ ३७ पैसा र बिक्रीदर ३० रुपैयाँ ५३ पैसा नै तोकेको थियो । कतारी रियाल १ को खरिददर ३१ रुपैयाँ २८ पैसा र बिक्रीदर ३१ रुपैयाँ ४४ पैसा तोकेको छ । हिजो खरिददर ३१ रुपैयाँ २८ पैसा र बिक्रीदर ३१ रुपैयाँ ४५ पैसा रहेको थियो ।
यस्तै, ओमानी रियाल १ को खरिददर २९६ रुपैयाँ ४५ पैसा तोकेको छ । हिजो खरिददर २९६ रुपैयाँ २८ पैसा तोकेको थियो । आज यूएई दिर्हाम १ को खरिददर ३१ रुपैयाँ ०१ पैसा र बिक्रीदर ३१ रुपैयाँ १८ पैसा तोकेको छ । हिजो खरिददर ३१ रुपैयाँ ०१ पैसा र बिक्रीदर ३१ रुपैयाँ १७ पैसा रहेको थियो ।
मलेसियन रिंगिट १ को खरिददर २७ रुपैयाँ ५० पैसा र र बिक्रीदर २७ रुपैयाँ ६५ पैसा तोकेको छ । हिजो खरिददर २७ रुपैयाँ ५२ पैसा र र बिक्रीदर २७ रुपैयाँ ६७ पैसा नै थियो । कोरियन वन १ सयको खरिददर ९ रुपैयाँ ६२ पैसा र बिक्रीदर ९ रुपैयाँ ६८ पैसा तोकेको छ । हिजो खरिददर ९ रुपैयाँ ६२ पैसा र बिक्रीदर ९ रुपैयाँ ६७ पैसा तोकेको थियो ।
कुवेती दिनार १ को खरिददर ३७३ रुपैयाँ ५९ पैसा र बिक्रीदर ३७५ रुपैयाँ ५६ पैसा तोकेको छ । हिजो खरिददर ३७३ रुपैयाँ ४७ पैसा र बिक्रीदर ३७५ रुपैयाँ ४४ पैसा रहेको थियो । यस्तै आज बहराइन दिनार १ को खरिददर ३०२ रुपैयाँ १४ पैसा र बिक्रीदर ३०३ रुपैयाँ ७३ पैसा तोकेको छ । हिजो पनि खरिददर ३०२ रुपैयाँ १४ पैसा र बिक्रीदर ३०३ रुपैयाँ ७३ पैसा तोकिएको थियो ।